တနှစ်ပတ်လည်တဲ့ မိတ္ထီလာ တဖက်သတ် အကြမ်းဖက်ခံရမှု…….. | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Bertil Lintner: Ethnic Groups Call for Federal Military Is Not Pragmatic
မိတ္ထီလာရဲ့ အနိဌာရုံတွေ… ဆုတောင်းကျိန်စာ »
တနှစ်ပတ်လည်တဲ့ မိတ္ထီလာ တဖက်သတ် အကြမ်းဖက်ခံရမှု……..
Picture မင်း ချစ် သူ
Author: Maung Maung (Shwe Keraweik) March 19 2014
မိတ္ထီလာ တဖက်သတ် အကြမ်းဖက်ခံရမှု အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်….
မိတ္ထီလာပြသနာမဖြစ်ခင်ပထမ တရက်ဖြစ်တဲ့.(၁၉-၃-၂၀၁၃) ရက်နေ့က စပြောရပါလိမ့်မယ်….
(၁၉-၃-၂၀၁၃)က မန္တလေးမြို့ အိုရီရဲန်တယ်လ်ဟောက်ခန်းမမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေးအခန်းအနားအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်…ဒီအရင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့
အရင်တုန်းကဆို…မန္တလေးမြို့မှာ…တည်းခိုခန်းဆိုတာ…တော်တော်ရှားပါးပါတယ်… ဒီတော့…နယ်က…ကုန်ရောင်းလာတဲ့သူ…ကုန်ဝယ်လာတဲ့သူတွေဟာ…မိမိတို့နဲ့နီးစပ်ရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ…တည်းခိုပြီးတော့…ရောင်းကြဝယ်ကြပါတယ်…။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ…ဆိုင်နေရာမသိတာ….လမ်းမသိတာ…ရောင်းမှားဝယ်မှားဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ် ရတာတွေကြောင့်…သက်ဆိုင်ရာကျောင်းတိုက်က…သံဃာတွေကိုယ်တိုင်…မိမိဒကာ တွေကို…
သံဃာတော်များကလည်း…ဈေးဝယ်များရဲ့ဘောက်ချာတွေတောင်းကြည့်ပြီး… မိမိ ဝယ်ခိုင်းသည့်ဆိုင်မှ…ဝယ်ယူလာတာမဟုတ်ဘူးဆိုလျှင်…ပစ္စည်းနဲ့ဈေးနှုန်းမှန်မမှန်
သံဃာတော်တွေနဲ့…ရင်းနှီး…ကျွမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်…ပုပ္ပါးဆရာတော် ဦးပရမ္မဝဏ္ဏသိဒ္ဓိ ဆိုလျှင်…
ကျွန်တော်တုိ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအကြား
ဘယ်လောက်ပင်ဖြစ်ကြ…ဖြစ်ကြ… မန္တလေးမြို့သည်…မန္တလေးသံဃာထု၏ ထိန်းသိမ်းမှုအောက်တွင်
၁၉၈၈-ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်တော့…အများသိကြသည့်အတိုင်း…ယုတ်မာကောက်ကျစ်သည့်… စစ်အစိုးရက…စည်းလုံးချစ်ကြည်…ညီညွတ်စွာရှိနေသော…မန္တလေးမှ…သံဃာတော်… များနှင့်…အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအကြား…သွေးခွဲရန်…စစ်အစိုးရလက်ပါးစေများကို မွေးထုတ်ကာ
၁၉၉၇ခုနှစ်…မန္တလေး…မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး…ဗိုက်ပေါက်သည့်ပြသနာကို…ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့သည့်…အလယ်ဘောင်ရပ်…ကောလဟလ…ဖြင့်…အစားထိုးလမ်းလွှဲကာ… မန္တလေးမြို့ပေါ်မှ…ဗလီများ…အတိုက်အခိုက်ခံရသည်အထိ…ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်…။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်…ဆူပူမှု…လက်တုန့်ပြန်မှုများ…ဖြစ်ပေါ်မလာအောင်…လိုက်လံ… တာဆီးမိသည့်…အပြစ်ကြောင့်…တပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေးတစ်မှ…ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ ရပြီး
…ထောင်၃နှစ်အချခံခဲ့ရကာ…မန္တလေးအိုးဘိုထောင်….(၄)တိုက်တွင်…တိုက်ပိတ်ခံခဲ့ရပါသည်…(နောက်မကြာမှီမှာပင်…ထိုအချိန်က…အလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုး အ ဖြစ်ပြောင်းရွှေ့လာသူ…
ဦဝိရသူသည်…သံဃာထု…အထင်ကြီးလေးစားသည့်……ဘိဝံသဘွဲ့ကို.. ဆွတ်ခူးရရှိထားသူဖြစ်သဖြင့်…၎င်းထက်…ထေရ်ကြီး…ဝါကြီး…သံဃာတော်ကြီးများ၏.. တရားတော်နှင့်ချွတ်ချော်သော…အကြောင်းများကို…ထောက်ပြဝေဖန်…ပုတ်ခတ်ခြင်း ဖြင့်
…လိုက်ဝိတ်တန်းမှ….ဟဲဗီးဝိတ်တန်းသို့တက်လာပြီးနောက်…မန္တလေးဘုရားကြီး… အနောက်၄၅တာရှိ…သာသနာ၂၅၀၀…ဇရပ်ကြီးအတွင်း…သံဃာငယ်များအား… ”မန္တလေးမှာ…၁၉၉၇ခုနှစ်အရေးအခင်းတုန်းက…ခေါင်းဆောင်မရှိလို့…မအောင်မြင်တာ…
-အစ္စလာမ်မုန်းတည်းရေးများကို….ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွင်း…အမြစ်တွယ်သွားအောင် စီမံကိန်းများချ ဆောင်ရွက်နေချိန်မှာ…ကျွန်တော်တို့…အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များက…
အ ခြေအနေကိုဘာမှမသိပဲ….ခါတိုင်းလိုနေမြဲတိုင်းနေ…စားမြဲတိုင်းစား…သွားမြဲတိုင်းသွား. နေကြပြီး
စစ်ထောက်လှမ်းရေးခင်ညွန့်လက်သပ်မွေးထားတဲ့ ဦးဝီရသူလိုသံဃာတွေက…မဟုတ် မမှန်…လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းတွေနဲ့…အစ္စလာမ်ဘာသာအပေါ်…ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ.အထင် အမြင်လွဲမှားလာအောင်…စနစ်တကျ….အမုန်းတရားများဟောကြား…စည်းရုံးနေတဲ့အ
ဒီအချိန်မှာ…ဦးဝီရသူရဲ့ပရောဂနဲ့…ကျောက်ဆည်အရေးအခင်းကြီးထဖြစ်ခဲ့ပါတယ်… အရေးအခင်းလို့သာ…သုံးလိုက်ရတာပါ….တကယ်တော့…ကျောက်ဆည်မှာလဲ… တဖက်သတ်…နိုင်ထက်စီးနင်း…အလုပ်ခံလိုက်ရတာပါ….မိတ္ထီလာမှာ…
…ပေ၁၀၀လောက်ပဲ…အကွာ အဝေးရှိတဲ့…’စုကြီးဗလီ’ ကစအဖျက်အစီးခံခဲ့ရတာပါ
အဲ့ဒီအချိန်မှာ….မန္တလေးမြို့က…အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ…အလန့်တကြားဖြစ်သွား.. ကြတယ်…မန္တလေးပတ်ဝန်းကျင်က…အစ္စလာမ်ရွာကြီးတွေကလူတွေ…အလန့်တကြား ဖြစ်ကုန်ကြတယ်…
တကယ်စဉ်းစားသင့်တာက…အဲ့ဒီအချိန်က…နိုင်ငံတော်အာဏာကို…အပြည့်အဝချုပ် ကိုင်ထားတဲ့…ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့…ဇာတိမြို့ကြီးမှာ…ဖြစ်ခဲ့တဲ့…အဖြစ်ခံခဲ့တဲ့… နိုင့်ထက်စီးနင်းဖြစ်ခဲ့မှုကြီးရဲ့နောက်ကွယ်မှာ…စနစ်တကျ…ကြိုးကိုင်မှုတွေနဲ့… တပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ကြီးပါခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပါ…ဒါပေမဲ့
ဒီအချိန်မှာ…ဦးဝီရသူဟာ…သူ့ရဲ့…စိတ်ရင်းစိတ်ကောင်းမှန်အပေါ်မှာ…ရပ်တည်နေတဲ့ အချိန်…သူ့ကို…ထောင်ထဲမှာနှစ်ရှည်လများ…အကျဉ်းချထားခဲ့တဲ့…မိခင်အဖွဲ့အစည်း ကို
သူကိုယ်တိုင်က…သူနဲ့အတူ…ထောင်အချခံရတဲ့…လက်ပန်ကျေးရွာက…မွတ်စလင် ၂၀ ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီး….လွတ်ငြိမ်ချမ်းသာခွင့်မရကြတဲ့…မွတ်စလင်တွေ… လွတ်မြောက်ရေးအတွက်…လှုတ်ရှားတောင်းဆိုမှုတွေလုပ်လာပါတယ်….။
…ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်…ကိုရဲရင့်ကျော်ကို…မေတ္တာရပ်ခံ…အဆက်အသွယ်လုပ်ပေးခိုင်းလို့… ကိုရဲရင့်ကျော်မှ…အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်…သတင်းထောက်…ကိုမင်းမင်းလတ်နဲ့…တွေဆုံ ပေးခဲ့ပါတယ်…။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကို…မန္တလေးမြို့…၃၂လမ်း…၇၇လမ်နှင့်၇၈လမ်းများကြားရှိ…Edu Zone…စာသင်ခန်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်…၂၀၁၂ခုနှစ်…ဇန္နဝါရီလအတွင်းကဖြစ်ပါလိမ့် မည်…အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကို…ညနေပိုင်းတွင်…ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး…အခန်းအနားတက် ရောက်သူများမှာ…(ကျွန်တော်မှတ်မိသ၍)…ဦးဝီရသူနှင့်…တပည့်သံဃာငယ်တပါး…
ကျောက်ဆည်မြို့နယ်…လက်ပန်ကျေးရွာမှ..ထောင်ကျနေသော(လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် မရရှိကြသော)…အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ…လွတ်မြောက်ရေးအတွက်…ဆန္ဒပြပွဲတရပ် ကို…ဘုရားကြီးရင်ပြင်ပေါ်မှာ..ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ကြောင်း…၎င်းအနေနှင့်
…အကျဉ်းသား မိသားစုများကို…အကျဉ်းသားတဦးလျှင်…ငွေကျပ် သုံးသောင်းစီလည်း
အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲတွင်…ဦးဝီရသူမှ..ကြော်ငြာချက်တစောင်လည်း…လက်မှတ်ရေးထိုး… ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်…စာအပြည့်အစုံကိုမမှတ်မိသော်လည်း…မှတ်မိသမျှကို..ဖေါ်ပြရမည်..ဆိုလျှင်
…”ဝီရသူဆိုတာလည်း…ကြောက်စရာမဟုတ်ပါ…မွတ်စလင်များသည်လည်း… ချစ်စရာကောင်းသောလူများဖြစ်မှန်းသိသွားပါပြီ…မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေး…ကမ္ဘာ့ငြိမ်း ချမ်းရေးအတွက်…မဆုတ်မနစ်…ကြိုးပမ်း…အားထုတ်ကြပါစို့” ဟူသော…အရေးအသား များဖြစ်ပါသည်….။
ထို့နောက်…ဦးဝီရသူနှင့်…ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့…အမှတ်တရဓာတ်ပုံများရိုက်ခဲ့ကြပြီး…ဦးဝီရသူမှ..(မန္တလေးတောင်ပေါ်တွင်…၎င်း…ငှက်ဘေးမဲ့လွှတ်နေပုံ နောက်ခံပေါ်တွင်…ရေး သားထားသော)…ငြိမ်းချမ်းရေးဆုတောင်း…ဗီနိုင်းများကို…ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုး..
အခန်းအနားအတွက်…ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်မှ…ဦးဝီရသူ…အမှူးပြုသောသံဃာတော်များ… အစ္စလာမ်ဘာသာဘက်မှ…ခလီဖာဟ်ဦးအေးလွင်(ရန်ကုန်)နှင့်အဖွဲ့…ခရစ်ယာန် ဘာသာဘက်မှ…အထက်မြန်မာပြည်ခရစ်ယာန်မက်သဒစ်အသင်းတော်..ဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော်…ဦးဇော်ဝင်းအောင်နှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ…ဟိန္ဒူဘာသာရေး အဖွဲ့ချုပ်မှ…ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ…မန္တလေးမြို့ပေါ်ရှိစိတ်ပါဝင်စားသူများကို ဖိတ်ကြားခဲ့ပါသည်….။
ကျွန်တော်လည်း…အခန်းအနားကျင်းပရန်မည်သို့မှမဖြစ်နိုင်တော့သဖြင့်…ဟိုတယ်ရှေ့ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှစောင့်ကာ…အခန်းအနားတက်ရောက်ရန်လာကြသူများကို…ရှင်း လင်းပြောပြပြီး…ပြန်လွှတ်လိုက်ရပါသည်…သာသနာ့တက္ကသိုလ်မှ…သံဃာတော်များ.. ခရစ်ယာန်ဘာသာခေါင်းဆောင်များ…ဟိန္ဒူဘာသာခေါင်းဆောင်များ…အစ္စလာမ်ဘာ သာခေါင်းဆောင်များ…ပြန်ကြွသွားပြီးသည့်နောက်…ဦးဝီရသူခေါင်းဆောင်သော… သံဃာတော်များ(၁၀ပါးခန့်ရှိပါမည်)…ရောက်ရှိလာပါသည်…အခြေအနေ…
ငြိမ်းချမ်းရေး တရားများကိုအတိုချုပ်ဟောကြားပြီး…ဆုတောင်းပွဲကို…ရှိသည့် ပရိသတ်နှင့်ပြုလုပ်ကာ ..ရောက်ရှိနေသော…သတင်းမီဒီယာများအား..ရှင်းလင်းပြောပြခဲ့ပါသည်…ဓမ္မဒူတ စာအုပ်များနှင့်…ငြိမ်းချမ်းရေး…သဝဏ်လွှာများကိုလည်း…လက်မှတ်ရေးထိုးဝေငှခဲ့ပါ သည်…။
ယခုကိစ္စကိုတင်ပြရခြင်းမှာ….တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးရဲမြင့်က ..ခွင့်မပြုပါက… ဦးဝီရသူ…ဘာမှလုပ်လို့မရကြောင်း…အများသိစေရန်ဖြစ်ပါသည်…..။
၂၀၁၂ခုနှစ်. မတ်လအတွင်းတွင်…တောင်သာလက်မရွံ့တပ်ဖွဲ့၏ …တပ်မှူးကြီး…ဦးအောင်သောင်း… ဦးဝီရသူထံလာရောက်တွေ့ဆုံပြီး…ကျောင်းအတွင်းရှိ…သီးသန့်အလျူမီနီယံ …အခန်း အတွင်း…အချိန်…တစ်နာရီခွဲခန့်ကြာအောင်…စကားပြော…ဆွေးနွေးသွားပြီးသည့် နောက်ပိုင်း
ဓမ္မဝီဟာရကျောင်းတိုက်ရှေ့တွင်… နံရပ်ကပ်စာစောင်များရေးသား၍ …
မီး လောင်သေဆုံးရပုံ…အစရှိသော…အနိဌာရုံပုံများကို…ပုံကြီးများချဲ့၍…စိုက်ထူထားပြီး.. အဆိုပါဖြစ်ရပ်များမှာ…မြန်မာပြည်အတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီး…မြန်မာနိုင်ငံမှအစ္စလာမ်ဘာ သာဝင်များကပဲ…ကျူးလွန်ထားသော…ရာဇဝတ်မှုများဖြစ်သယောင်.
ကျွန်တော်များအနေနှင့်လည်း…တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှ…တတ်နိုင်သည့်စွမ်းအားဖြင့်… ဗုဒ္ဓဘာသာကို…အစစ်အမှန်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြသော…စစ်မှန်သည့်ရဟန်းသံဃာ များ ထံချည်းကပ်၍…ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေး…ပဋိပက္ခများမဖြစ်ပွားစေရေးအတွက်
ပျာက်ခြင်းမလှ… ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါသည်…အလှူငွေအများစုမှာ…ဦးဝီရသူထံလှူဒါန်းကြခြင်း…ဖြစ်ပါ သည် …။
သံဃာလေးပါးအားပင့်ဆောင်ဆေးကုသပေးခဲ့ပါသည်…အစိုးရမှ…မီးလောင်သံဃာများ အား…ဆေးရုံတွင်…ဆေးကုသပေးသည့်ကိစ္စသာတာဝန်ယူသဖြင့်…လူနာစောင့်သံဃာ များ…ဆွမ်းကွမ်း…ကားခ…အစစအရာရာအတွက်ဒုက္ခရောက်နေကြသဖြင့်…မန္တလေးမှ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ထံဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံလာသဖြင့်….ကျွန်တော်တို့မှတ ဆင့်…အကူအညီတောင်းပေးမှုကြောင့်…ရန်ကုန် မေတ္တာကမ်ပိန်း မှကိုဆန်းနှင့်…
…အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဟာဂျီဦးတင် မောင်သန်းတို့က
ကျွန်တော်များ…အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကလည်း…အဆိုပါ…အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေး.. အမုန်းတရားဟောကြားဖြန့်ဝေမှုအထောက်အထားများကို…ရနိုင်သ၍စုဆောင်းပြီး… သက်ဆိုင်ရာ…ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများမှတဆင့်…နိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့သို့… တိုင်ကြားခြင်း…ဒေသဆိုင်ရာ…အုပ်ချုပ်ရေး…အဖွဲ့အစည်းများသို့…တင်ပြတိုင်တန်းခြင်းများကို
…မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏…ပိတ်ပင်တားဆီးမှု… ခံခဲ့ ရပါသည်…။
ဇွတ်စီစဉ်မှု ကြောင့် …ဘုရားကြီးအလယ်တိုက်သို့…နေရာပြောင်း…ကျင်းပခဲ့ရပါသည်…
ဘဒ္ဒန္တဦးရာဇဓမ္မဘိဝံသ ကိုယ်တော်တိုင်ကြွရောက်ခဲ့ပြီး…ဦးဝီရသူလည်း …တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်…။
ထိုအတောအတွင်း…မန္တလေးမြို့ပေါ်တွင်…ဆိုင်ကယ်တိုက်မှု….ကားတိုက်မှု…. လင် မယားစကားများရန်ဖြစ်မှု…သမီရည်းစားအမှု…အိမ်နီးနားချင်း…ဈေးသည်ချင်း…စကား များရန်ဖြစ်မှု…အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားပြသနာတက်မှုများသည်…တဖက်ဖက်မှ…အစ္စ လာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်နေပါက…ဦးဝီရသူ၏…မစိုးရိမ်တရားရုံးသို့ရောက်ရှိသွားပြီး… မည်သူကမှ…ခန့်အပ်ထားခြင်းမရှိသော…တရားသူကြီး…ဦးဝီရသူ၏…လူမျိုးစွဲ…ဘာ သာစွဲဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကို…ခံယူနေကြရသောအချိန်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်…အစိုးရ… ဌာန ဆိုင်ရာအသီးသီးကလည်း…ဦးဝီရသူကို…လုပ်ချင်ရာ…လုပ်ခွင့်ပေးထားခဲ့ပါသည်…။
ထိုအတောအတွင်း…မန္တလေးမြို့သို့…ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဖြစ်ကြသော…ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနှင့်…ဝန်ကြီးဦးစိုးသိန်းတို့ရောက်ရှိလာပြီး…မန္တလေးမြို့မှ…လူထုအခြေပြု ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်…မြမန္တလာဟိုတယ်တွင်တွေ့ဆုံပွဲကျင်းပပြုလုပ်ရာသို့…
အမုန်းတရား ဟောကြားခြင်းများရပ်တန့်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်…တင်ပြခဲ့သော်လည်း… ဦးအောင်မင်းက…မြန်မာပြည်မှာ…အမုန်းတရားဟောကြားတာမရှိပါဘူး…ဟု
…ဗြောင် ငြင်းခဲ့ပါသည်…ကျွန်တော်မှ…အထောက်အထားများနှင့်ပြောပြသောအခါမှ…ဦးအောင် မင်းကဘာမှပြန်မပြောတော့ဘဲ…ဦးစိုးသိန်းမှ…ပြေလည်ရာပြေလည်ကြောင်းပြောပြီး… တဘက်က..hate speech တွေပြောနေရင်…ခင်ဗျားတို့က..love speech တွေပြောကြ ပေါ့ဗျာဟု…လျှောချသွားခဲ့ပါသည်…ကျွန်တော်က…ကျွန်တော်တို့ဘက်မှ.ဘာသာပေါင်း စုံချစ်ကြည်ရေးပွဲတွေလုပ်ဖို့…စီစဉ်တော့လည်း…မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က.. ခွင့်မပြုပါ…ဟု..ပြောသောအခါ…ဦးရဲမြင့်ကို…သူတို့ပြောပေးထားပါမည်…
စစ်စခန်များသဖွယ်…မြေအောက်ခန်းများနှင့်ဆောက်လုပ်ထားပြီး….လက်နက်များစုဆောင်းထား ပါ သည်ဟူသော…အခြေအမြစ်မရှိသည့်…စွတ်စွဲမှုကို…ပြုလုပ်လာပြန်ပါသည်…။
လးပြင်လေးရပ်မှ…သံဃာတော်များ…ဘာသာပေါင်းစုံမှ…ဘာသာရေးအကြီးအကဲများနှင့် ကျင်းပပြု လုပ်ပြီး…
မန္တလေးမြို့ပေါ်ရှိ…၎င်းတို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့်… ဗလီများသို့…လေ့လာရေးခရီးအဖြစ်…ပင့်ဆောင်ပြသမည်…ဆိုသည့်အစီအစဉ်ကို… ပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်…။
အဆိုပါအခန်းအနားကို…၂၀၀၃ခုနှစ်…မတ်လ၉၁၉)ရက်နေ့တွင်…ကျင်းပပြုလုပ်ရန် နှင့် …အဆိုပါအခန်းအနားသို့…ဦးဝီရသူကိုပါအောင်ဖိတ်ကြားရန်…အစ္စလာမ်ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများက..ကျွန်တော့်အားတာဝန်ပေးအပ်ပြီး…တရားဝင်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိရေးအ တွက်…
This entry was posted on March 21, 2014 at 3:08 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
3 Responses to “တနှစ်ပတ်လည်တဲ့ မိတ္ထီလာ တဖက်သတ် အကြမ်းဖက်ခံရမှု……..”
drkokogyi Says:	March 21, 2014 at 9:56 am | Reply မင်း ချစ် သူ
၀မ်းနည်းမှတ်တမ်း မိထ္တီလာ အသံ
ရေး.. ( Jack Marson )မီးတောက်ကြားက မိထ္တီလာမွတ်စလင်မ်တွေ
တုတ်၊ဓါး၊လှံကြားက မိထ္တီလာ မွတ်စလင်မ်တွေ
သင်တို့နဲ့ အတူ အကျွန်ုပ်ရှိသည်။
အကြမ်းဖက်အုပ်စု ရမ်းကားသူ တစ်ချို့
မျက်ရည်တွေနဲ့ သင်တို့နဲ့ အတူ
မြင်တွေ့ပါမည် တစ်နေ့ တစ်ချိန်
မိသားစုနှင့် အကျွန်ုပ် အတူ
၀မ်းနည်း ပါ၏ မိထ္တီလာသူ
Jack Marson ( ဘိုမင်းနိုင်)
မှတ်ချက်။ ။ မိထ္တီလာမှ အကြမ်းဖက် ခံရသော အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်၊ မွတ်စလင်မ် အားလုံးအတွက် (၂၀.၃.၂၀၁၄) နေ့အတွက် တစ်နှစ်ပြည့် အောက်မေ့ဖွယ်အဖြစ် မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၀း၅၅)မိနစ်တွင် ရေးစပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
drkokogyi Says:	March 21, 2015 at 3:02 am | Reply Min Thet Naing added2new photos.
‪#‎Last‬ Pray before death
Myanmar Muslim are the people who kneel Allah (swt) and Doa for Akhirat even though Terrorist Myanmar Buddhist are urging to pray their monks and convert to Buddhism.
Innocent Myanmar Muslim student from Mingalar Zayyon Madrasa was chosen to the correct path of Shaheedi and brutally killed by Myanmar Buddhist on 21st march 2013 at Meiktila, Myanmar.
Don’t try to forget the terrorism activity of Myanmar 969 Buddhist.
အကြမ်းဖက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကိုဦးချစေပြီး ဘာသာပြောင်းဖို့ အကြပ်ကိုင်တာကိုတောင်မမူ့ပဲ ထာဝရတည်ရှိတော်မူတဲ့ Allah (swt) ထံမှာ ရိုကျိုးဒူးတုပ်စွာနဲ့ အာခေရသ် အတွက်ဒိုအာတောင်းတာ…..မြန်မာမွတ်စလင်မ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ အာရဗီဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းက စာသင်သားလေးဟာ အမှန်ကန်ဆုံးလမ်းဖြစ်တဲ့ ရှဟီးဒ်အဆင့်အတန်းကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီကလေးကို အကြမ်းဖက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက မတ်လ ၂၁ရက် ၂၀၁၃ မှာ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ပစ်ခဲ့ကြတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက အကြမ်းဖက် ၉၆၉ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ ရက်စက်ယုတ်မာမူ့တွေကို လွယ်လွယ်နဲ့မမေ့လိုက်ကြပါနဲ့။
drkokogyi Says:	March 29, 2015 at 5:31 am | Reply Maung Maung Skw
ပညာတတ်တယောက်ကလွဲတာကို ဘယ်လိုဆင်ခြေ ပေးကြမှာလဲ
တမင်သက်သက် စေတနာဆိုးနဲ့ လွဲခဲ့တာဆိုတော့ရော